Faah faahin:- Qarax ay dad badan ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax ay dad badan ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad laga helayaa qarax aad u xoogan oo duhurnimadii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuq si weyn u camiran oo ku yaala xaafada Kaawo Godey ee degmada Wadajir.
Qaraxaas ayaa sida la sheegayo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay islamarkaana lasoo dhigay suuq mashquul badan oo lagu iibiyo qaadka oo ku taala xaafadda Kaawo Godey ee degmada Wadajir.
Ku dhawaad 30 qof ayaa la xaqiijiyay inay qaraxaasi ku dhinteen, iyadoona sidoo kale tiro intaasi ka badan ay dhaawacantay.
Dadka geeriyooday ayaa la sheegayaa inay ahaayeen dad isugu jira shacab iyo askar ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaas oo ku sugnaa goob maqaayad ah iyo goob lagu iibiyo khaadka oo u dhaw goobta uu qaraxa ka dhacay.
Qaraxa kadib waxaa goobtaasi soo gaaray gaadiidka gurmadka deg dega ah, iyagoona halkaasi ka qaaday dhaawacyo aad u badan.
Dad goob-joogayaal ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in qaraxaasi uu ahaa kii ugu qasaaraha badnaa ebid oo lala beegsado goob ay ku sugan yihiin dad shacab ah.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda qaranka oo soo gaaray goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ka bilaabay baaritaano xoogan, mana jirto cid illaa iyo haatan ay baaritaanadaasi kusoo qab-qabteen ama sheegatay mas’uuliyadda qaraxaas.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxaan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Muqdisho tan iyo markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.